China Pcb Layout mpanamboatra sy orinasa, mpamatsy teny quote | Pandawill
Ny fotodrafitrasa misy fitaovana tsara sy ny fifehezana kalitao tsara indrindra amin'ny dingana rehetra amin'ny famokarana dia ahafahanay manome antoka ny fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny Layc Pcb, Birao boriborintany 6, Pcb Fabrication, Pcb Fabrication And Assembly, Izahay dia mandray tsara ny mpanjifa, ny fikambanam-barotra ary ny namana manerantany mba hifandray aminay sy hikatsaka fiaraha-miasa ho tombontsoan'ny tsirairay. Miankina amin'ny hery ara-teknika matanjaka izahay ary mamorona teknolojia tsy manam-paharoa hatrany hamaly ny fangatahan'ny Pcb Layout, ny vokatray dia eken'ny mpampiasa sy atokisan'ny mpampiasa ary afaka mamaly ny filàna ara-toekarena sy sosialy tsy tapaka. Miarahaba ny mpanjifa vaovao sy taloha avy amin'ny sokajin-javatra rehetra izahay mba hifandray aminay amin'ny fifandraisana amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy sy hahatratra fahombiazana eo amin'ny samy izy!
12 layer HDI PCB ho an'ny fikirakirana rahona
Ity dia takelaka boribory 12 ho an'ny vokatra computing Cloud. HDI boards, iray amin'ireo haitao haingam-pandeha haingam-pandeha ao amin'ny PCB, dia misy ao Pandawill izao. Ny HDI Boards dia misy vias jamba sy / na nalevina ary matetika dia misy microvias 0,006 na kely ny savaivony. Izy ireo dia manana haavon'ny boribory avo kokoa noho ny tabilao mahazatra.
Misy karazany 6 ny takelaka HDI, amin'ny alàlan'ny vias avy any ambonin'ny ka hatrany, miaraka amin'ny vias nalevina ary amin'ny alàlan'ny vias, sosona HDI roa na maromaro miaraka amin'ny alàlan'ny vias, substrate passive tsy misy fifandraisana elektrika, fanamboarana tsy misy ilana azy amin'ny alàlan'ny tsiroaroa sy fananganana hafa ny fananganana tsy misy fotony. mampiasa tsiroaroa sosona.
Ity dia tetik'asa fivoriambe PCB ho an'ny fitaovana fandinihana simika. Ao amin'ny Pandawill, ny fahatakarana ny teknolojia anay dia manao anay mpiara-miasa tokana amin'ny fampitaovana sy ny fandrefesana ary manome vahaolana ho an'ireo orinasa mitarika eto amin'izao tontolo izao izahay
Rafitra fanaovana sonia varavarana nomerika
Ity dia tetik'asa fivoriambe PCB ho an'ny rafitra famantarana nomerika nomerika. Ny takelaka nomerika nomerika dia apetaka eo ivelan'ny varavaran'ny trano misy tohatra. Ny tohatra dia tsy hoe manana lohahevitra tsy miova ihany, fa ny fanamarihana anarana rehefa mihetsika dia manamora ihany koa raha toa ka azo raisina mivantana amin'ny Internet ny fanamarihana anarana rehetra.
Ity dia tetik'asa fivoriambe PCB ho an'ny rafitra fanaraha-maso ny lalamby. Ny indostrian'ny indostrialy dia iray amin'ny ampahany lehibe naroson'ny Pandawill nefa izao isika dia manatri-maso ny Internet of Things, miaraka amin'ny fijerena manokana ny Internet Internet of Things (IIoT), izay hitondra fifandraisana sy mandeha ho azy amin'ireo orinasa sy orinasa manodidina ny izao tontolo izao.
Eagle Pcb Design, Pcb & Pcba mpanamboatra, Nanya Laminate Pcb mpanamboatra, Isola Fr406 mpanamboatra Pcb, Birao boribory mavesatra, Torolàlana momba ny layout Pcb, Pcb Manamboatra, Mpanamboatra Pcb 12 Layer,